Global Voices teny Malagasy » Ny Tontolon’ny Bilaogy Toniziana sy ny Fifidianana Frantsay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2017 18:33 GMT 1	 · Mpanoratra samsoum Nandika (fr) i Claire Ulrich, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Frantsa, Tonizia, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Marihana fa efa nivoaka tamin'ny volana Martsa 2007 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Bilaogera Toniziana marobe no naneho ny fahalianany momba ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay. Misy antony maro no mahatonga azy ireo liana amin'izany. Ara-tantara, nozanahan'i Frantsa nandritra ny 75 taona i Tonizia ary manana fifandraisana ara-pitiavana sy fankahalana ny firenena roa tonta, manjaka kokoa ny fitiavana noho ny fankahalana. Frantsa no mpiara-miasa voalohany ara-toekarena amin'i Tonizia. Ary firenena onenan'ireo mpila ravinahitra marobe i Frantsa. Maro amin'ireo bilaogera ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana no mizaka ny zom-pirenena Frantsay, na monina ao Frantsa.
Na izany aza, raha ny hevitro, ny tena antony mahaliana anay amin'izany fifidianana izany dia ny hetahetanay amin'ny adihevitra politika, ny hetahetanay hifanakalo hevitra momba ireo kandidà, sy hitsikera sy tsy hankasitraka, ary tsy misarika velively ireo mpanivana ao amin'ny fitondrana Toniziana. Raha tsy afaka mandray anjara amin'ny fifidianana demaokratika marina ao amin'ny firenenay izahay, mba afaka mandray anjara amin'ny fifidianana Frantsay.
Ny tsy fisian'ny fahalalahana amin'ny fisafidianana ny mpitarikanay sy ny fitondranay hatramin'ny fahaleovantena no nahatonga anay tsy liana intsony amin'izay fifidianana tontosaina ao amin'ny firenenay. Mahafantatra isika rehetra fa sarinady mampihomehy fotsiny izany, izay efa omanina ao amin'ny foiben'ny Minisiteran'ny Atitany ny fifidianana. Voalaza fa efa nosafidian'ny filoha tenany ihany ireo kandidà amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany ary tsy mahagaga ahy intsony izany satria isaky ny mandray fitenenana izy ireo, dia manokana ny fotoanan'izy ireo amin'ny fisaorana azy noho ireo zava-bitan'ny (filoha) rehetra.
Ny tsy fisian'ny fahalianana, sy ny tsy firaharahiana ireo mpikambana ao amin'ny governemantanay, no lohahevitra tao amin'ny lahatsoratr'i Marsoise .
Bref, j’ai remarqué que la plupart d’entre nous connaît par cœur la scène politique française, est capable d’énumérer la majorité des membres du gouvernement français, peut énumérer les propositions de chaque candidat, en faire la critique et proposer ses propres modifications..ils nous manquerait plus que la carte d’électeur pour voter:)
Mais combien d’entre nous est capable de donner les noms de nos ministres (moi personnellement même le premier ministre je connais pas son nom!), d’énumérer nos partis politiques, de distinguer le programme de chacun d’entre eux, de citer les dernières mesures gouvernementales…
Sommes-nous plus français que les français ou moins tunisiens que nous devrions l’être?
Raha fintinina, nanamarika aho fa ny ankamaroantsika dia mahafantatra tsara ny sehatra politika Frantsay, ary mahavita mitanisa ny ankamaroan'ireo mpikambana ao amin'ny fitondrana Frantsay, afaka mitanisa ny tolo-kevitr'ireo kandidà tsirairay, mitsikera sy manolotra hevitra. Ny kara-pifidianana ahafahana mifidy sisa no tsy hananantsika 🙂
Saingy firy amintsika no mahavita manome ny anaran'ireo minisitra ao amintsika (izaho manokana, dia na ny anaran'ny praiminisitra aza tsy fantatro!), tsy mahavita ihany koa mitanisa ireo antoko politika, manavaka ny fandaharan'asan'izy ireo, mitanisa ireo fepetram-panjakana farany…
Tsy mahafantatra betsaka aho..
Frantsay kokoa noho ireo Frantsay ve isika sa tsy Toniziana araka ny tokony izy?
Mani l ’africain , indray namoaka lahatsoratra mahafinaritra, mampahafantatra ireo kandidà Frantsay tahaka ny hoe kandidà Toniziana ho filoham-pirenena. Lahatsoratra kanto sy mirindra, ka lasa « Si Markouzy » i Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal , « Sihem Malki » ary François Bayrou, « Firas Bouzagour ». Indrisy fa tsy afaka mandika ny lahatsoratra manontolo aho, fa ity ny ampahany mikasika an'ny Madama Sihem Malki.
Kandidà manohitra indrindra ny hevitry Atoa Merkouzi i Ramatoa Sihem meli, kandidàn'ny Antoko Sosialista. Kandidà ao amin'ny firenena izay mbola tsy nentin'ny vehivavy hatramin'ny nitondran'ny mpanjakavavy Dido (Elyssa). Toy ny sosialista rehetra, miresaka indrindra momba ireo olona mahantra Ramatoa Malki, ary milaza fa tokony hanohana ireo saranga mila fanampiana ny governemanta. Manan-kevitra maro izy, ary vonona hanova ny lalàmpanorenana mihitsy mba hanavao ny tombontsoam-bahoaka amin'ny politika, ary mandrisika azy ireo mba hiditra amin'ny fiainam-panjakana. Saingy fantatsika fa ny vondrona (sosialista) toy izany, dia be resaka kanefa zara raha miasa. Raha voafidy, dia tsy hisy maha samy hafa azy amin'ireo ankavanana akory.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/24/104145/
 Mani l: http://manichaeus.blogspot.com/
 lahatsoratra : http://manichaeus.blogspot.com/2007/04/blog-post.html